Guddiyada Wakiilka Ardayda | Vaikuttajan reittikartta
Guddiyada Wakiilka Ardayda
Sharcigu wuxuu oranaaa in ardayda ku jira dhamaan heerarka waxbarasho waxay xaq u leeyihiin in codkooda la dhegeysto goorta iskuulkooda go’aaminaayo arrimaha ayaga uu quseeyo. Dhaman dugsiyada sare iyo iskuulada farsamada waxaa loogu baahan yahay in ay la haadaan guddi ardayda matasha. Ardayda guddiyada ah waxay sidoo kale yihiin golaha ugu main ee ardayda looga dhegeysto fekradahooda ee iskuulada dhamaystiran, kaa soo ah, iskuulada hoose iyo sare hoose.
Guddiga wakiilada ardayda qaabab badan oo kala duwan ayay u shaqeyn karaan. Waxay abaabuleyaan dhacdooyin bulsho iyo howlo maweelo kale iyo waxay wel weladan jira ayay waxay u soo jeedinayaan, tusaale ahaan Guddiga Iskuulka. Wakiilada guddiga ayaa badanaaba lagu soo xushaa ayadoo doorasho loo maro.
Sidoo kale waxay hami kartaa in aad adigu noqoto guddi matala ardayda – waxay kaliya ee aad u baahan tahay waa in aad daneysaa sida howlaha iskuulkaaga loo qabto kaliya! Haddii aadan ogeyn haddii uu jiro guddi noocan ee iskuulkaaga ama sida loogu biiro, weydii mid ka mid ah maclimiintaada.
Ardayda dugsiga sare iyo dugsiyada farasamada ayaa sidoo kale leh kooxo dano qaran leh kuwasoo taageera guddiyada ardayda oo dadnahooda gacan ka geysta heer siyaad ee qaran. Middowga Ardyada Dugsiyada Sare ee Finnish (Suomen Lukiolaisten Liitto) wuxuu matalaa sida urur u daneeya ardayda dugsiyada sare iyo Isbaheysiga Ardayda Finnish (Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry) iyo Ururka Ardayda Iskuulada Farsamda ee Finnish (Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry) waa ururada u daneeya ardayda dugsiyada sare ee farsamada. Danaha ururka ee ardayda Swedish-kuhadasha waa Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf.